Aịzaya 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
13 Okwu ikpe e kwuru megide Babịlọn,+ nke Aịzaya nwa Emọz+ nụrụ mgbe ọ hụrụ ọhụụ: 2 “Gwunyenụ ihe mgbaàmà+ n’elu ugwu nke bụ́ nkume nkume, nke na-enweghị ihe kpuchiri ya. Kpọkuonụ ha, feerenụ ha aka,+ ka ha bata n’ọnụ ụzọ nke ndị a ma ama.+ 3 Mụ onwe m enyewo ndị m doro nsọ iwu.+ Akpọwokwa m ndị dike m maka igosi iwe m,+ bụ́ ndị m na-enwe oké aṅụrị. 4 Geenụ ntị! Ọ dị ìgwè nọ n’ugwu, nke yiri ndị dị ọtụtụ!+ Geenụ ntị! Alaeze dị iche iche na-eme mkpọtụ, mba ndị a kpọkọtara ọnụ+ na-emekwa mkpọtụ! Jehova nke ụsụụ ndị agha na-akpọkọta ụsụụ ndị agha.+ 5 Jehova na ngwá ọgụ nke amamikpe ya si ala dị anya na-abịa,+ site na nsọtụ eluigwe, ibibi ụwa dum.+ 6 “Tienụ mkpu ákwá,+ n’ihi na ụbọchị Jehova dị nso!+ Ọ ga-abịa dị ka mbibi nke si n’aka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.+ 7 Ọ bụ ya mere aka niile ga-eji kụda, obi ga-alọkwa mmadụ efu mmiri.+ 8 Obi erughị ndị mmadụ ala.+ Ha nọ n’ihe mgbu, ime na-emekwa ha; ime na-eme ha dị ka nwaanyị nke na-amụ nwa.+ Ha kporopụrụ anya na-ele ibe ha. Ihu ha achagharịwo.+ 9 “Lee! Ụbọchị Jehova na-abịa, ụbọchị ebere na-agaghị adị n’ihi ọnụma na iwe dị ọkụ, iji mee ka ala a bụrụ ihe ijuanya,+ ka o wee kpochapụkwa ndị mmehie n’ala a.+ 10 N’ihi na kpakpando nke eluigwe na ìgwè kpakpando Kisịl +ha agaghị enwupụta ìhè ha; anyanwụ ga-agbakwa ọchịchịrị mgbe ọ na-awa, ọnwa agaghịkwa enye ìhè ya. 11 M ga-akwụ elu ala ụgwọ ihe ọjọọ ya, kwụọkwa ndị ajọ omume ụgwọ njehie ha.+ M ga-emekwa ka nganga nke ndị mpako kwụsị, m ga-ewedakwa mpako nke ndị na-achị n’aka ike ala.+ 12 M ga-eme ka mmadụ efu dị ụkọ karịa ọlaedo a nụchara anụcha,+ meekwa ka mmadụ dị ụkọ karịa ọlaedo nke Ofa.+ 13 Ọ bụ ya mere m ga-eji mee ka eluigwe maa jijiji,+ ụwa ga-emekwa mkpatụ pụọ n’ọnọdụ ya n’ihi oké iwe nke Jehova nke ụsụụ ndị agha+ n’ụbọchị iwe ya dị ọkụ.+ 14 Ọ ga-erukwa na, dị ka nne mgbada a na-achụ ọsọ, nakwa dị ka ìgwè atụrụ nke na-enweghị onye na-achịkọta ha,+ onye ọ bụla ga-agbakwuru ndị nke ya; onye ọ bụla n’ime ha ga-agbala n’ala ya.+ 15 A ga-amagbu onye ọ bụla a hụrụ, a ga-ejikwa mma agha gbuo onye ọ bụla a nwụdere;+ 16 a ga-akụri ụmụ ha n’ihu ha.+ A ga-akwakọrọ ihe niile dị n’ụlọ ha, dinaakwa ndị nwunye ha n’ike.+ 17 “Lee, m na-akpali ndị Midia+ ibuso ha agha, ndị ọ na-enweghị ihe ha ji ọlaọcha kpọrọ, ndị na-enweghịkwa mmasị ọ bụla n’ọlaedo. 18 Ha ga-eji ụta ha gbajaa ọbụna ụmụ okorobịa.+ Ha agaghị emere mkpụrụ nke afọ ebere;+ anya ha agaghịkwa emere ụmụ ndị Babịlọn ebere. 19 Babịlọn, nke bụ́ ihe e ji chọọ alaeze niile mma,+ ịma mma na nganga nke ndị Kaldia,+ ga-adị ka mgbe Chineke kwaturu Sọdọm na Gọmọra.+ 20 A gakwaghị ebi n’ime ya ebi,+ ọ gaghịkwa enwe ebe obibi malite n’otu ọgbọ ruo n’ọgbọ ọzọ.+ Onye Arab agaghị ama ụlọikwuu ya n’ebe ahụ, ọ dịghịkwa ndị ọzụzụ atụrụ ga-eme ka atụrụ ha makpuru n’ebe ahụ. 21 Anụ ọhịa ndị bi n’ógbè mmiri na-adịghị ga-amakpu n’ebe ahụ. Ikwiikwii ga-ejupụta n’ụlọ ha.+ Enyí nnụnụ ga-ebikwa n’ebe ahụ, ndị mmụọ ọjọọ yiri ewu ga na-awụgharị n’ebe ahụ.+ 22 Nkịta ọhịa ga-anọ n’ụlọ elu ndị dị n’ime ya na-eti mkpu,+ nnukwu agwọ ga na-anọkwa n’obí eze ya ndị mara mma, oge ya eruola nso, a gaghịkwa agbatịkwuru ya ụbọchị.”+